Inona no ao anatiny? Aiza ilay izy? Ahoana? Paikady Marketing amin'ny Internet | Martech Zone
Sabotsy, Martsa 1, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Rehefa hanokatra magazay ianao dia manapa-kevitra hoe aiza no hametrahana ilay magazay, inona no hapetraka ao amin'ilay magazay, ary ahoana no hitondranao ny olona any. Ny fanokafana tranokala, na inona na inona fananganana antsinjarany na tsia dia mitaky paikady mitovy amin'izany:
Inona no hitranga ao amin'ny tranonkalanao?
Ho aiza ny tranonkalanao?
Ahoana no ahitan'ny olona azy?
Ahoana no hitahirizanao azy ireo?
Inona no hitranga amin'ny tranokalanao?
Minoa na tsia, misy lakile roa amin'ny fitahirizana magazay. Ny ankamaroan'ny olona dia mijery ny zava-dehibe indrindra, izay novidian'ny olona. Ny faharoa kosa tsy dia miharihary loatra. Io no resahin'ny olona. Ohatra iray? Mivarotra kafe matetika aho. Manana an'izay rehetra tadiavin'ny mpankafy kafe izy ireo - tontolo milamina, mpiasa lehibe, olona mahafinaritra ary sakafo be.
Ny trano fisotroana kafe kosa dia manolotra entana hafa, resahina amin'ny olona. Manolotra mozika mivantana izy ireo ny zoma sy asabotsy. Manana sary kanto mahafinaritra eo amin'ny rindrina rehetra azon'ny mpitsidika mividy izy ireo. Ary manana efitrano malalaka hitsidihan'ny vondrona sy hihaonana izy ireo - noho izany dia manao fivorian'ny Chambre de Commerce, mpanao Rainana, Vondrom-piangonana, Alina tononkalo sns.
Mandeha tsara ny fivarotana kafe! Ny kafe ihany no mitazona ny orinasa ananany - fa raha tsy misy teti-bola dokam-barotra, ireo entana hafa izay manampy amin'ny fahazoana mpiaro vaovao. Izany no antony itomboan'ny orinasa aorian'ny taona iray.
Mety hanana votoaty tsara ny tranokalanao, toy ny fivarotan'ny kafe any aminy ny kafe tsara. Saingy tsy midika izany fa misy olona tonga! Misy tetika maromaro hanampiana amin'ny fampiroboroboana ny orinasanao tokony hampiasanao:
Mitady fomba hafa hamoronana marketing amin'ny vava… fanehoan-kevitra amin'ny tranokala hafa, fanentanana viral, public, karatra fandraharahana bilaogy, mandray anjara amin'ny tambajotra sosialy, ara-tsosialy maripejy, mampifandray amin'ireo tranokala hafa (fampiroboroboana).
Aiza ny tranonkalanao? Manao ahoana ny endriny? Ahoana no ahitan'ny olona azy?
Rehefa manokatra magazay ianao, ny zavatra farany hataonao dia ny manamboatra kilometatra vitsivitsy miala ny làlambe iray ary manokatra trano maloto. Mila apetrakao ny magazay amin'izay antenain'ny olona hisy azy sy ny toerana hahitan'ny olona azy.
Ianao koa dia te-hanokatra fivarotana iray ahazoana aina ary tadiavin'ny olona hiverina. Misy fivarotana solosaina ety ivelany eny amiko izay nolalovako fa tsy niditra mihitsy. Ny ao anatiny dia toy ny arimoara fitahirizana misy fitaovana miparitaka eraky ny toerana. Fa rehefa miditra ao amin'ny Best Buy aho dia tsy afaka ny tsy handehandeha eny amin'ny rindrin'ny televiziona fisaka isaky ny mandeha. Tiako ny mitsidika Best Buy toy izay tiako miantsena any noho ny hatsarany.
Ny fitsidihanao voalohany ny trano fisotroako kafe ary fantatrao fa tsy ao amin'ny Starbucks ianao. Misy loko mamirapiratra, zavakanto an-taonina, ary ny gara barista dia miatrika ny mpiambina rehefa mandeha izy ireo. Ny gara koa dia lavitra ny varavarana fidirana, ka manam-potoana hijerena izay ao amin'ny magazay ny olona ary manapa-kevitra ny amin'ny baikony. Tsy a famokarana famokarana fivarotana natao hampidirana anao sy hivoahana.
Misy paikady vitsivitsy amin'ny toerana misy ny tranokalanao sy ny fisehonao izay tokony hoeritreretinao.
Famolavolana sy fampiharana paikady ny motera fikarohana mba hahitan'ny olona ny tranokalanao. Tsy voatery hidika hoe dokam-barotra isan-tsindry izy io - fa tsy midika hoe misoratra anarana amin'ny tranokalanao miaraka amin'ny Search Engines, manaparitaka a robots.txt manaova rakitra amin'ny alàlan'ny bots fikarohana ary ampiasao Sitemaps mba hanomezana tetika fitetezana ny motera fikarohana hitety ny tranokalanao, mampandre ny motera fikarohana rehefa manova ianao, ary manoratra atiny maloto amin'ny motera fikarohana.
Misafidiana anarana domain tsara. Sehatra mora tadidin'ny olona izany, fanitarana .com (mbola zava-dehibe ankehitriny), ary tsy misy hyphenation. Hahatsiaro ny yourstore.com ny Folks, saingy tsy hahatsiaro bots-r-us.info izy ireo. Indraindray ny domains tsara indrindra dia ireo teny lakile tadiavinao. Ohatra iray: ny bilaogiko dia hanao tsara kokoa amin'ny filaharana SEO raha toa ka manana 'marketing' na 'teknolojia' ao aminy ilay anaran-tsehatra.
Estetika momba ny tranokala. Ny fisehosehoana sy ny lohahevitra momba ny tranokalanao dia mila taratry ny matihanina sy ny toetra tianao aseho. Matetika aho no nilaza fa aza manahy momba izany - ny atiny rehetra no jerena. Diso anefa aho. Ireo tranonkala lehibe kokoa dia mahita tombony amin'ny fifamoivoizana a new design. Te hanokatra tranokala 2.0 ve ianao? Hamarino tsara izany toa tranokala Web 2.0!
Ahoana no hitazomana ny olona eo amin'ny tranokalanao ary hiverina?
Marina ny nanomezanao anarana azy, manana ny varotra mety aminao ianao, efa nilaza izany tamin'ny olona ianao… manomboka tonga izy ireo nefa ahoana no hitahiry azy ireo? Raha tsy manana votoaty sy paikady ampy hitazomana ny olona hiverina ianao dia handany ny fotoananao rehetra amin'ny fitadiavana mpitsidika vaovao fa tsy hitandrina izay anananao.
Votoatiny tsara sy mahasarika izay mahaliana ny mpamakinao dia mitazona azy ireo hiverina.
Manana tranokala ve ny tranokalanao RSS omeo hanina? Ny RSS dia tsy teknolojia mahafinaritra fotsiny, paikady fitahirizana tsara tarehy. Na dia nisy olona tsy niverina tao amin'ny tranokalanao nandritra ny fotoana kelikely aza, dia mety ho tafintohina any anaty sakafony izy ireo indraindray - angamba rehefa manome izay tadiaviny ianao!
Manana safidy fisoratana anarana amin'ny mailaka ve ny tranokalanao? Averina indray, ity dia fitaovana fitazomana tsara, mampandre ireo prospect na mpanjifa liana efa naneho fahalianana (amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny mailakao).
Misy maningana mazava ho azy. Nampiasako tamim-pahatsorana ny fakana sary Prada eto satria hitako teo afovoan'ny tsy fahitana ilay lahatsoratra tao amin'ny magazay Prada… Ataoko fa toerana mahatsiravina mety ho fampielezana viriosy tsara ankehitriny!
Tags: fananganana tranonkalampivarotra kafesehatra anaranaPradafihazonanaSitevotoatin'ny tranonkalafivarotanatranonkalateny vava